Vakawanda Votambira Mutongo weKuti Vana Vane Makore Gumi neMatanhatu Vasanzi Vatenda Kuita Bonde
Dare repamusoro reConstituional Court nezuro pakapa mutongo wekuti mwanasikana anonzi abvuma zvepabonde anofanira kunge ave nemakore gumi nemasere kana kuti 18 kwete gumi nematanhatu kana kuti 16. Izvi zvatambirwa nemasanfano akawanda anorwira kodzero dzevanasikana sezvo vange vave nemakore vachikurudzira kuti izvi zviitwe.
Izvi zvinotevera kukwidzwa kwenyaya iyi kumatare nemadzimai maviri Muzvare Loveness Mudzuru naMuzvare Ruvimbo Tsopodzi avo vakakwira kudare vachida kuti mutemo wewanano kana kuti Customary Marriages Act uvandudzwe.
Vaviri ava vakaroodzwa vasati vabvazera. Vakaenda kudare vachimirirwa negweta ravo VaTendai Biti.
Gurukota rezvemitemo VaZiyambi Ziyambi vakamboudza dare reparamende kuti painge pasina chakaipa kuti vanasikana vane makore gumi nematanhatu vaite zvepabonde vachiti vakawanda vacho vanenge vaine miviri yasvika.
Asi gweta vachishanda nesangano re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, VaObey Shava vaudza Studio 7 kuti zvainge zvataurwa naVaZiyambi zvaityora kodzero dzevanasikana.